Kwezinye iimeko (njengoko kuchaziwe kumanqaku okusebenzisa apha ngezantsi), amagama acacileyo kwaye acacileyo aphikisayo-oko kukuthi, zichasene nezichaso.
Isichazi sichaza ngokucacileyo indlela ecacileyo, ecacile ngokucacileyo, ebonakalayo ngokukhawuleza, okanye epheleleyo. Ifom yesalathiso ngokucacileyo .
Isichazi sichaza ngokucacileyo, sichaswanga, okanye sichazwe ngokuthe ngqo. Ifom yesalathiso ngokucacileyo .
" Ndikunike umyalelo ocacileyo . Ndilindele ukuthotyelwa."
(UJames Carroll, iBridge Bridge, u- Houghton Mifflin, ngo-1991)
"Uninzi lwabantu lubona imifanekiso ebonisa ukuziphatha ngocansi kubantwana ukuba babe ngabantwana beentlobano zesini, oko kuthetha ukuba nabaselula ababelana ngesantya phakathi kwabo ngokwabo, banokuthi bathathwe ngamatyala amaninzi angayenza isigwebo esinzima kwaye badinga ukubhaliswa kweso sigxina ngesondo. "U
(I-Associated Press, "I-Teen Sexting ye-Teen-Teen ye-Teen Sexting ikhuthaza imizamo yokuPhucula iMithetho ye-Porn Porn." I-New York Times , ngoMatshi 17, 2016)
"Uthando" lelinye lala mazwi abonisa oko kwenzekayo kwiilwimi ezindala, ezisebenzisayo. Le mihla kunye neenkwenkwezi ze-movie kunye nama-crooners kunye nabashumayeli kunye nabagula ngengqondo yonke into evakalisa igama, akufihli nto ngaphandle kokuthanda ngokucacileyo into ethile. Ingqiqo, ndiyayithanda imvula, le bhodi, ezi desiki, wena. Akuthethi nto, uyabona, ngelixa igama libonakalisa into ecacileyo -umnqweno wokuba wabelane ngawo wonke umntu kwaye unomnye umntu. "
(UJohn Updike, "Ngomso nangomso, njalo njalo." Iindaba zakuqala: 1953-1975 . I-Random House, 2003)
Kumele uphulaphule ngokucokisekileyo kwaye uhlalutye ukuze uqonde umyalezo opheleleyo weSnoop.
"Kwiziko lezemfundo, 'ukuxhamla ngokucacileyo ,' okanye ubuhlanga obucacileyo njengoko kulapha, kubhekisela kwiifom ezifihlakeleyo zokungabikho ngenjongo engathandabuzekiyo echaphazela isigwebo kunye nokuziphatha kwentlalo."
(Rose Hackman, "'IJaji leMnyama eliPhezulu': UkuFundiswa kweeNkcazo zokuThuthukiswa kweeRhafu Ukuba Ubulungisa buyizifama." I-Guardian [UK], Matshi 17, 2016)
"La mazwi amabini avela kwiingcambu ezifanayo zesiLatatan ezithetha 'ukuphosa.' Xa kukho into ecacileyo , ibonakala, ivulekile ukuba abantu bayibone. " Intsingiselo iyinto echasene nayo, ithetha ukuba 'ixutywe,' ngentsingiselo yokuba inqaku layo likhutshelwe okanye liqulethwe kwenye into kwaye ayikho into ecacileyo. .
Inqaku elicacileyo lenza iphuzu ngokucacileyo, ngokucacileyo, nangokungaqondakaliyo ... Umfanekiso ocacileyo , incwadi, ifilimu, njl. Ibonisa ubunqunu okanye ubulili ngokuvulekileyo nangemifanekiso.
"Xa kukho into ecacileyo , ithetha, ingacacisiwe ngokucacileyo ... Inkolelo eqinileyo , ukuzithemba ngokupheleleyo, ukholo oluthe ngqo , njl, kubandakanya ukungabi namathandabuzo okanye ukukhusela."
(UStephen Spector, Ngamana Ndingakucaphula Ngaloo nto ?: Isikhokelo sokuGragram kunye nokuSebenza . I-Oxford University Press, 2015)
"Amagama abonakala ngathi aphikisayo - kodwa into engalindelanga ukuba bajoyine ekuthetheni ukuba oko bakuchazayo akunakwenzekayo. Ukuthembela ngokupheleleyo kuqinisekileyo njengokholo lokwenene ngenxa yokuba yinyani ngokwenene. iphelile (jonga ukubonisa, ukuphazamiseka ) ... I-Tacit isetyenziswa rhoqo ngendlela efanayo.
(Wilson Follett, Usetyenziso lwamaMerika lwangoku: Isikhokelo , u-Erik Wensberg.) Hill kunye noWang, ngo-1998)
(a) Nangona abaninzi abantu bavuma ukuba amajelo alunakuze athumele umyalezo okhuthaza ngokugqithiseleyo ubundlobongela, abanye abantu bathi ubundlobongela kwimithombo yeendaba buphethe umyalezo we- _____ ukuba ulwalamano luyamkeleka. "
(UJonathan L. Freedman, Ulwaphulo-mbambano kunye neMiphumo Yalo kwiNgqumbo , 2002)
(b) Iipakethi zeelagi ziphethe _____ izilumkiso zezempilo.
(a) Nangona abaninzi abantu bavuma ukuba amajelo alunakuze akhuphe umyalezo okhuthaza ngokugqithiseleyo ubundlobongela, abanye abantu bathi ubundlobongela kwimithombo yeendaba buhambisa umyalezo ocacileyo ukuba ulwalamano luyamkeleka. "
(b) Iipakethi zeelagi ziphethe izilumkiso zezempilo ezicacileyo .
UWilliam F. Buckley iSigama Quiz
I-Rio 2016 yeGymnastics Results
Iintlanu eziPhambili zoMbhoxo weMidlalo yoMbhoxo wexesha lonke